Mandidy ny A330-300 ny SAS
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Mandidy ny A330-300 ny SAS
Nisafidy ny A330-300 ny SAS mba hanara-penitra kokoa ny andiany lava halavirana. A330-300 vaovao iray misy motera RR Trent 772B no hiditra ao amin'ny tambajotram-pitaterana Scandinavian amin'ny telovolana faharoa 2019. SAS dia mpanjifa Airbus nanomboka tamin'ny taona 1980 niaraka tamin'ny fiaramanidina Airbus misy fiaramanidina 57 (A340 valo, A330 valo ary 41 fiaramanidina A320 Family). hatramin'izao.
"Faly izahay fa nifidy ny fianakavian'i Airbus fanindroany ny SAS tamin'ity herinandro ity. Ity fanoloran-tena bebe kokoa nataon'ny SAS amin'ny A330 ity dia mampiseho ny toekarena miasa tsy manam-paharoa sy ny fahaizan'ny miasa an'ity fiaramanidina ity, "hoy i Eric Schulz, Lehiben'ny tompon'andraikitra ara-barotra Airbus. "Faly izahay fa manohy ny fiaraha-miasa maharitra amin'ny SAS."
Ny A330 dia iray amin'ny fiaramanidina widebody mahomby indrindra sy mahomby indrindra manerantany miaraka amin'ny toe-karena ambony indrindra amin'ny sehatry ny toekarena ka mahatonga azy io ho fari-piainan'ny maodelim-pandraharahana amin'ny asa lavitra maharitra mitombo. Hatramin'izao, ny A330 Family dia nahasarika baiko maherin'ny 1,700, ka nahatonga azy io ho fiaramanidina malalaka be mpividy indrindra eto an-tany amin'ny sokajy misy azy. Fiaramanidina A1,350 Family mihoatra ny 330 no manidina anio miaraka amin'ireo mpandraharaha 110 mahery manerantany. Miaraka amin'ny fahamendrehana miasa amin'ny 99.4 isan-jato sy ny fanatsarana ny vokatra isan-karazany, ny A330 Family no fiaramanidina mpiadidy lafo vidy sy mahomby indrindra hatreto.
RIU Hotels & Resorts ary UNICEF: Maherifo ho an'ny ankizy mpianatra 4000 any Mexico
Ireo firenena izay mpanao heloka bevava ny mpizahatany LGBT